Seddexda fasal ee Maskaxda waa kuwa dhammaadkii manvantara ku jiray xiisaha, sagittary, scorpio.
QOFKA ayaa ka soo baxa laba xidid latin, per, iyada oo loo marayo, iyo sonus, cod. Persona wuxuu ahaa maaskaro ama dharka ay jilayaashu xirtay oo ay ka hadashay. Marka waxaan helnaa shakhsiyadda ereyga. Shakhsiyadda aadanaha, waxa la dhisay oo ay hadda adeegsato shakhsiyadda, maskaxda sare, manas, si ay ula xiriirto adduunka, ma aha waqtiyadii ugu dambeeyay. Asalkeeduna wuxuu ku yaal bilawga taariikhda adduunka.
Ereyga shakhsiyan waxaa u adeegsada si aan kala sooc lahayn dadweynaha iyo xitaa byosophists oo ay tahay inay ogaadaan kala duwanaanshaha, maadaama ay kala saarayaan u dhexeeya shakhsiyadda iyo shakhsiyadda. Shaqsiyaddu ma aha hal, wax fudud ama shay; waa mid ka kooban waxyaabo badan, dareenno iyo mabaadi'da, kuwaas oo dhammaantood ay u muuqdaan sidii hal. Mid kasta oo ka mid ah waxay qaadatay da'da si loo horumariyo. Laakiin inkasta oo shaqsigu ka kooban yahay qaybo badan, abuuritaankiisu waxaa ugu wacan laba il, maskaxda maanka, ama neefta (♋︎), iyo maskaxda is-miyirka, ama shakhsiyadda (♑︎).
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in lagala tashado zodiac-ka markii laga hadlayo mowduuc kasta oo la xiriira ninka, maxaa yeelay aaladda loo yaqaan 'zodiac' waa nidaamka uu qofku ku dhismo. Marka aaladda loo yaqaan 'zodiac' mar la qadariyo, ayaa awood u leh inuu wax ka barto qayb kasta ama mabda'a nin ama guud ahaanba iyada oo loo marayo astaanteeda gaarka ah. Dhamaan astaamaha qeybta hoose ee soodhadhka 'zodiac' waxay kuxiran yihiin been-abuurka shaqsiyadda, laakiin calaamadaha kansarka (and) iyo capricorn (its) waa hal abuurayaasha dhabta ah. Dhamaan shaqsiyaadka aan is-ogaanin waxay ka yimaadaan kansarka (♋︎); waxkasta oo caqli gal ah oo ka warqabta shaqsiyanka waxay ka yimaaddaan hadiyado (ric). Aynu si kooban u baarno taariikhda shakhsiyadda iyada oo loo marayo zodiac.
Sida ku xusan qodobbadii hore ee zodiac-ka, dhulkeenu wuxuu matalaa wareegga afaraad ama muddada weyn ee horumarka. Muddadan afaraad waxaa loo baahan yahay in la horumariyo toddobo jinsiyo waaweyn ama wajiyada aadamiga. Afar ka mid ah jinsiyadan (♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎) ayaa soo maray muddadooda, oo waxaas oo dhan marka laga reebo haraadiga afaraad waa la waayey. Kililka shanaad ee weyn (♏︎) hadda waxaa lagu horumariyey iyada oo loo marayo qaybaha hoose ee adduunka oo dhan. Waxaan ku jirnaa tartan-hoosaadka shanaad (♏︎) ee xididka shanaad (sidoo kale ♏︎). U diyaargarowga iyo bilawga tartan-hoosaadka lixaad wuxuu ka dhacayaa Ameerika. Xiddigii ugu horreeyay ee xidid-noqdaa waa kansar (♋︎).
Jaantus 29 waxaa laga soo saaray maqaal hore si loo horumariyo isirka jinsiyadaha si aad ah ayaa loo fahmi karaa booskoodana ku leh nidaamka zodiac. Tan waxaa lagu ogaan karaa astaamaha shakhsiyadda, iyo gaar ahaan xiriirka uu la leeyahay iyo xiriirka ka dhexeeya calaamadaha kansarka (♋︎) iyo kansarka caanka ah (♑︎). Jaantuska 29 waxay muujineysaa wareegayaga afaraad oo leh xididadiisa iyo hoosaadkiisa. Mid kasta oo ka mid ah zodiac-yadu waxay metelayaan isir-asal, oo mid kastoo ka mid ah kuwan waxaa lagu muujiyey inay leeyihiin astaamo-hoosaadyo ama jinsi ka hooseeya xariiqa jiifa
♈︎ ♉︎ 戴︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ 戴︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Tartankii ugu horreeyay ee weyn waxaa lagu soo bandhigay cudurka kansarka (♋︎). Umadahaas waxay ahaayeen neef. Ma haysan qaabab noocan oo kale ah oo leh bini-aadamnimadeenna hadda jirta. Iyagu waxay ahaayeen meersi u eg qaab neefsashada oo kale. Waxay ahaayeen toddobo nooc, fasallo, amarro ama heerarkii neefsashada, nooc kasta, fasal ama nidaam, waxay ahaayeen qaab ku habboon mustaqbalkiisa asalka u dhigma, iyo qayb-hoosaadka tartankaas. Xiddigii hore ma uusan dhiman sidii tartamayaashii raacay; waxay ahayd oo waxay ahayd tartan ugu habboon ee kuwa la raaco.
Bilowgii tartankeena, kan afaraad, wareega, kansarka (♋︎) jaranjaradii kansarka (♋︎) ee ugu horeeyay waxaa raacay leo (♌︎) jaangooye kaasoo ahaa qeybtii labaad ee tartankii koowaad, iyo wixii la mid ah maamuleyaashii kale ee matalay astaamaha (♍︎) iyo maktabadda (♎︎), scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), iyo capricorn (♑︎). Markii la soo gaadho tartankii xiisada (erar) tartankii neefsashada (♋︎), taasi waxay astaan ​​u tahay dhamaadka waqtigooda, kabricorn (♑︎) inuu yahay kaamil ku habboon isirka oo dhan, iyo dhammaystirka kansarka (♋︎) wadajirka ee tartankaas kii ugu horreeyay, labadooduba isku diyaarad bay wada joogeen.
Markii hoggaanka afaraad, maktabadda (♎︎), ee tartanka neefsashada (♋︎) ay xukumaan, way neefsadeen oo iska soo saareen iska-hor-imaadka labaad ee weyn, nolosha (♌︎), oo ka soo gudbay toddobadii marxaladood ama darajo. sida lagu muujiyey jaranjarada neefta (♋︎) midabka. Laakiin halka neefta (♋︎) ay ahayd astaamaha guud ee neefta (♋︎) midabka, astaamaha labaad, nolosha (♌︎) orodka, oo xukuntay nolosha oo dhan (♌︎). Markii orodkii labaad ama noloshu (♌︎) uu isna gaadhay markiisii ​​ugu dambaysay ama darajada (♑︎) ee tartanka, si ka duwan tartankii koowaad, guud ahaanba waa baaba'ay. Markuu, orodkii nolosha, uu gaadhay darajadiisa, wuxuu bilaabay inuu soo saaro tartankii saddexaad oo ahaa qaab (♍︎) tartan, iyo sidii noocyadii tartankii qaabku u soo saaray orodkii nolosha, nolosha (life) ) Tartan ay ka maqnaayeen iyaga. Labada qaybood ee koowaad ee foomka (♍︎) tartanka waxay ahaayeen astaan ​​astaan, sidoo kale qeybtii hore ee qeybta saddexaad (♍︎)-hoosaadka. Laakiin qaybtii dambe ee tartankii saddexaad waxay noqdeen kuwo adkaysi iyo ugu dambayn jireed.
Tartanka afraad, jinsiga (♎︎), wuxuu ka bilaabmay bartamaha saddexaad ama nooca (♍︎). Tartankeenii shanaad, rabitaankii (♏︎), wuxuu ka bilaabmay badhtamihii afaraad (♎︎) tartan waxaana abuuray isbahaysi jinsi. Hadda, si aan u aragno xiriirka ka dhexeeya tartamada afaraad iyo shanaad oo leh tartankii ugu horreeyay, iyo halka aan u taagannahay horumarka.
Sidii oroddii koowaad ay u neefsatay kii labaad, orodkii nolosha (♌︎), jiritaanka, sidaa darteed orodka nolosha ee raacaya tusaalahii u dejiyey, soo saaray tartankii saddexaad kaas oo sameeyay qaabab. Foomamkaani waxay ahaayeen bilowgii astral, laakiin si tartiib tartiib ah ayey u noqdeen jir ahaan markii ay soo dhawaadeen ama gaareen heerka ♎︎ digrii. Qaababkoodii ayaa markaa ahaa waxa aan hadda ku magacawnay bini'aadamka, laakiin maahan ilaa markii afaraad uu bilaabmay, miyay ku abuurmeen carruur. Tartankii afraad wuxuu bilaabmay badhtamihii saddexaad, oo sidii tartankeena shanaad wuxuu ku dhashay dhexda tartankii afaraad jidhkeenu wuxuu u samaysanyahay si isku mid ah.
Muddooyinkaan, heerarka neefsashada ee tartamada neefsashada ayaa la daawaday oo gacan ka geystey horumarinta midkasta oo u gaar ah iyadoo loo eegayo heerka ugu sareeya iyo sida ay u kala sarreeyaan heerka hoggaamiyeyaashaas. Tartanka neefsashada kuma uusan noolaan dhulka cufan sida jirkeenu u nool yahay; waxay ku noolaayeen goos goos goos goos ah oo wali ku hareersan dhulka. Tartankii nolosha wuxuu ka dhexjiray dhulka neefsashada, laakiin sidoo kale dhulka buu ku hareereeyey. Markii orodkii nolosha uu soo maray oo uu soo saaray jir, xubnaha bikrada (♍︎) heerarkii neefsashada (♋︎) ayaa la soo saaray qaabab kala duwan oo ka socda meeshi uu noloshu ka dhammaaday ama la nuugo. Foomamka astral-ka ah ee la saadaaliyay ayaa ku noolaa nolol dhexdeeda, taas oo laga yaabo inaan u dhigno jawiga dhulka. Markii ay xoog badnaayeen oo sii xoogaysteen, waxay ku noolaayeen sidii innagoo kale, oo ku noolaaday dhulkii adag. Neefsashada guud ahaan guud ahaan waxaa la dhihi karaa waa aabe aadanaha, oo loo yaqaan "Doctrine Doctrin" oo loo yaqaan "bharishad pris". wuxuu sameeyaa fasalka bikrada (♍︎) ama heerarka guud ee loo yaqaan 'bharishad'. Qaababka ayaa noloshu u nuugtay sida dhirtu u sameyso waxayna isu dhaleen naftooda iyagoo sii maraya metamorphosis u dhigma kan basbaaska. Laakiin qaababku waxay abuureen, si tartiib tartiib ah u horumarisay xubnaha galmada. Markii hore haweeneydu waa sida bikradaha (♍︎), ka dibna, sida damacgu u muuqday, xubnaha labka ah ayaa lagu soo saaray qaababkan. Kadibna waxay soo saareen isbahaysi jinsi. In muddo ah ayaa tan lagu go'aamiyay iyadoo loo eegayo xilliga ama wareegga, oo ay maamusho tartanka ku habboon ee loo yaqaan neefsiga.
Ilaa waqtigan, aadamiga jir ahaaneed wuxuu ahaa mid aan lahayn maskax shaqsiyeed. Qaababku waxay ahaayeen kuwo bini-aadam ahaan leh, laakiin marka loo eego dhinacyada kale oo dhan waxay ahaayeen xayawaan. Iyaga waxaa ku hagaagay damacooda kuwaas oo ahaa xoolo daahir ah; laakiin, sida xayawaanada hoose, doonistoodu waxay ahayd noocooda oo ay xakameyn jireen wareegga xilliyada. Waxay ahaayeen xayawaan dabiici ah oo u dhaqma sida ay u dhaqmayaan iyo ceeb la'aan. Waxay lahayn dareen maskaxeed maxaa yeelay iyagu ma aysan aqoonin sida ay u dhaqmaan waxa aan ahayn rabitaankooda. Tani waxay ahayd xaalada bini-aadamka jir ahaaneed sida lagu qeexay Baybalka isagoo ah Jannadii Ceeden. Illaa wakhtigan aadamiga-xayawaanka jir ahaaneed wuxuu lahaa dhammaan mabaadi'da uu dadkeenna hadda joogo leeyahay, maanka mooyee.
Asal ahaan tartankii koowaad wuxuu soo ifbaxay tartankii labaad ama nolosha, oo orodkii nolosha ayaa soo saaray tartankii saddexaad oo qaabab yeeshay. Kadib qaababkani, adkaynta iyo nuugida tartanka nolosha, waxay dhiseen jirka jirkooda naftooda. Dabadeed rabitaanku wuu toosay oo wuxuu ku firfircoon yahay qaababka; wixii dibedda ka jiray hadda waxay ka shaqeeyaan gudaha. Neefku wuxuu dhaqaajiyaa rabitaanka, damacgu wuxuu siiyaa jihada nolosha, noloshu qaab ayey ku dhisan tahay, qaabkuna wuxuu muujiyaa arrimaha jirka. Mid kasta oo ka mid ah jirka ama mabaadi'daani waa muujinta guud ee noocyada ugufiican ee neefta neefsashada, mid walbana sida ay tahay.